Galaxy Note 9 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain | Androidsis
Galaxy Note 9 ayaa si rasmi ah u timid Spain
Maalin inbadan ay sugayeen ayaa hada xaqiiq ah. Samsung ayaa si rasmi ah uga bilaabatay dalka Spain dhammaadkii ugu dambeeyay, Galaxy Note 9. Dhowr usbuuc ka dib soo bandhigideeda rasmiga ah, iyo ka dib markii la ilaaliyo suurtagal, aaladda ayaa si rasmi ah looga bilaabay dalkeenna. Taleefan ay shirkaddu ku doonayso inay ku horumariso iibinta dhammaadkeeda sanadka 2018.
Rajooyinka laga qabo Galaxy Note 9 ee shirkadda Kuuriya waa sarreysaa. Markaa waxaa hubaal ah inaad masuuliyad weyn kaa saaran tahay hortaada, waxaana jira su'aalo ku saabsan in iibkaagu uu ku noolaan doono wixii ay shirkaddu filayso Tani waa wax la go'aaminayo bilaha soo socda.
Laga bilaabo maanta waa suurtagal in la iibsado taleefanka shirkadda Kuuriya ee dalkeenna. Waan la kulanay laba nooc oo kala duwan oo taleefanka ah xagga RAM iyo kaydinta gudaha. Marka waa suurtagal in la doorto nooca ku habboon waxa aad raadineyso.
Dhinaca hal waxaan haynaa nooca Galaxy Note 9 oo leh 6 GB RAM iyo 128 GB oo keyd gudaha ah. Noocaan taleefanka ah wuxuu yeelan doonaa qiimo dhan 1.009 euro. Tani waxay ku jirtaa kiiska in aaladdaan qalabka bilaashka ah la iibsado.
Nooca labaad ee Galaxy Note 9 wuxuu leeyahay 8 GB RAM iyo 512 GB oo keyd gudaha ah. Boos celinta ayaa loo caleemo saaray inay tahay nooca ugu caansan adeegsadayaasha. Qiimaheedu xoogaa wuu ka sarreeyaa kiiskan, isagoo qiimo ku leh Isbaanishka 1.259 euro.
Galaxy Note 9 waxaa si bilaash ah looga iibsan karaa meelaha caadiga ah ee iibka (Fnac, Corte Inglés, MediaMarkt).), In kasta oo ay sidoo kale suurtogal tahay in loo tago hawl wadeenada oo sharad lagu qiimeeyo heerka sare ee shirkadda Kuuriya. Telefoonka Waxaa lagu iibinayaa midabbo guduud iyo madow ah, oo leh S-Pen isku midab ah. Sidoo kale waa suurtagal in lagu iibsado buluug mugdi ah, oo la socda S-Pen oo huruud ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Galaxy Note 9 ayaa si rasmi ah u timid Spain
Soo dejiso sawirada Xiaomi Pocophone F1